Safiirka Jarmalka Somalia oo sheegtay in Jarmalka 100 milyan dollar ugu yaboohay Somalia… – Hagaag.com
Safiirka Jarmalka Somalia oo sheegtay in Jarmalka 100 milyan dollar ugu yaboohay Somalia…
Jarmalka ayaa boqol milyan oo doollar ugu yaboohay Sooomaaliya, sidaasina waxaa sheegtay safiirka Jarmalka ee Soomaaliya , haweeneyda Annett Günther oo ka hadashay munaasanad lagu xusay midowga labadii Jarmal oo lagu qabtay xarunta Midowga Yurub ee magaalada Muqdisho.
Labada dal ayaa sidoo kale gaaray heshiisyo horumarineed,kuwaa oo kala ah Iskaashiga maaliyadda iyo Iskaashiga farsamo, waxaana si wadajir ah heshiiska u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo safiirka Jarmalka ee Soomaaliya.
“Jarmalka waxaa ka go’an taageerrada iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya.” Amb. Annett Günther ayaa sida ka sheegtay munaasabadda xuska israaca labada Jarmal ee Muqdisho lagu qabtay.
Jarmalka ayaa ah isbahaysi istiraatiijiyadeed oo Soomaali ay leedahay, waxa kale oo uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan deeq bixiyeyaasha caalamiga ah ee taageera horumarinta iyo nabad ku soo dabaalidda Soomaaliya.